Application Services - Study Abroad
About STUDY ABROAD Information Centre
Hot line: +959-5151008
University in United Kingdom
University in The United States of America
Student & Parents Visa Services
Talk to STUDY ABROAD Consultant
lupoporno pornhu.cc xnnx ifeoma caught by hidden cam.
STUDY ABROAD Information Centre သည် Australia, Canada, Holland, New Zealand, Singapore, Switzerland, United Kingdom နှင့် United States of America ရှိ တက္ကသိုလ်ကြီးများ ၊ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်း များ၏ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုမှုကို လက်ခံရရှိထားသော ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု စင်တာကြီး တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ STUDY ABROAD Information Centre နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တက္ကသိုလ်ကြီးများကို လျှောက်ထားသည့် မြန်မာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတိုင်း အတွက်ကို ဝန်ဆောင်ခ မယူဘဲ၊ အခမဲ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအနေနှင့် အဆိုပါ တက္ကသိုလ်များကို မိမိကိုယ်တိုင် လျှောက်ထားပါက ကျောင်းလျှောက်ရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတန်းများ ၊ နိုင်ငံအလိုက် မတူညီသော လျှောက်ထားမှု ပုံစံများ နှင့် Time-Zone မတူညီမှုတို့ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၏ တာဝန်ခံများ နှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် အလုပ်များပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများ ရရှိနိုင်ပါသည်။
STUDY ABROAD Information Centre မှ ကျွမ်းကျင် တာဝန်ခံများမှ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ နိုင်ငံ နှင့် လျှောက်ထားသော တက္ကသိုလ်များ ၏ ကျောင်းလျှောက်ထားမှု ပုံစံကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ရှင်းလင်း ပြောကြားပေးနိုင်သည့် အပြင်၊ လိုအပ်သော စာရွက်စာတန်း များကို ပြည့်စုံအောင် ညွန်ကြားပေးပါသည်။
Education Level (required)
What are you interested in studying? (e.g Law, Business, Engineering etc) * (required)
What is your destination country for your studies? (e.g Australia, Singapore, UK etc) (required)
STUDY ABROAD Information Centre Offices in Myanmar
ဒိုင်းမွန်းကွန်ဒို၊တိုက်(ဘီ) ၊ (၁၅)လွှာ၊အခန်းနံပါတ် (၁၅-၀၂) ၊ (မေတ္တာဦးမျက်စိဆေးခန်းအနီး) ၊ ပြည်လမ်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
(၀၉) ၅၁၅၁ ၀၀၈
အမှတ် (၃၂၆)၊၆၂လမ်း၊၂၉လမ်းနှင့်လမ်း၃ဝကြား၊(ဝေပုလ္လာရာမ၊ မက္ခရာတိုက်အနောက် ပေါက်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်) မန္တလေးမြို့။
(၀၉) ၄၂၀၀ ၉၉၉၉ ၇
brunette shows her body.http://www.porndigger.pro valentina nappi stickingalong pipe in pussy.
STUDY ABROAD © 2020 / All Rights Reserved